Soo dejisan Simple Port Forwarding 3.8.5 – Vessoft
WindowsShabakadDejinta iyo MaamulkaSimple Port Forwarding
Bogga rasmiga ah: Simple Port Forwarding
Gudbinta fudud Port – software ah reserved iyo niyad san ku soo koobin qalabka shabakad. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ku darto dekedaha cusub ee Moodeemka ama routere aan la tirtiro kuwii hore iyo bedelaan caga oo sidoo kale la isugeeyey gaadiidka ka mid dekedda in kale. Sahlan Port gudbinta taageertaa Mudanayaasha soonka iyo automatic ah goobaha aad ku badbaadi inta lagu jiro xawaaladaha ee software-ka. Sahlan Port gudbinta kuu oggolaanayaa in aad u kala bedesho ee ma guurto ah oo firfircoon IP-cinwaanada. Sidoo kale software ah waxaa ku qoran liiska badan oo gaadmada ah oo diyaar u ah noocyada kala duwan ee codsiyada iyo ciyaaraha.
Hagidda ee modem iyo router dekedaha
Taageerada noocyo badan oo ka mid ah routere
Badbaadiya oo user qaabeynta
Liiska badan oo qaabeynta diyaar
Soo dejisan Simple Port Forwarding
Faallo ku saabsan Simple Port Forwarding
Simple Port Forwarding Xirfadaha la xiriira
Software in ay tayadoodii soo koobin ee la xiriira internet-ka. Software waxay bixisaa wax soo saarka ugu weyn ee bandwidth ah.